Today is National Voter Registration Day - Somali | Multnomah County
Talaado, Sibteembar 22, 2020
Kala Xidhiidh: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)
Doorashada Guud waa Talaado, Noofember 3, 2020.
Doorashada Guud ee Noofember 3 ee Oregon waxaa kamid ah tartamaha Madaxweynaha Maraykanka, Xildhibaanada Maraykanka, Aqalka Wakiilada Maraykanka, Xog Hayaha Gobolka Oregon, Xisaabiyaha Gobolka, Xeer Ilaaliyaha Guud, kuraasta gobolka iyo kuwo kale oo badan. Codeeyayaashu waxay sidoo kale go'aansan doonaan talaabooyinka codaynta gobolka iyo deegaanka.
Waraaqaha codaynta waxaa boosta loogu diri doonaa dhamaan codeeyayasha Degmada Multnomah ka duwaan gashan laga bilaabo Arbacada, Oktoobar 14. Waxaa muhiim ah in la xaqiijiyo inaad isku duwaan geliso codaynta oo waxa aad cusboonaysiisaa is duwaan gelintaada si markaa aad sida ugu dhakhsaha badan aad ugu heli karto warqadaada codaynta.
Ugu dabaaldeg Maalinta Diwaangalinta Codbixiyaha Qaranka Adoo qorshaynaya CODAYN!
Maanta waa Maalintii Diwaangalinta Codbixiyayaasha Qaranka! Nagu caawi dabaaldeg MAANTA adiga oo isu diwaangalinaya inaad codayso. Isdiwaangali Sebteember oo #CODEE Noofember. Hore isku diwaangalisay si aad u codayso? Hubi in kaydka diwaangalinta codbixintaada wuu saxsan yahay sidoo kale cusboonaysi cinwaankaga hadii aad guurtay. Waad ka booqan kartaa diwaangalintada codbxinta oonlaynka oregonvotes.gov/myvote. Kusoo biir La Socodka Warqada Codaynta (Track Your Ballot) si aad u hesho bidhaan qoraal, tilifoon, ama iimayl marka kaadhkaga codaynta lagusoo dhigo boosta.
Marka aad hubiso inaad is diwaangalisay, fidi kalmada oo caawi qoyskaaga, saaxiibadaa, iyo jaarkaagu adoo hubinaya inay isku diwaangaliyeen codayn. Gel Qorshayso Inaad CODAYSO! Bushqada Isduwaan Gelinta Codeeyaha ee Maqal iyo Muuqaalka ah oo ay ku jiraan shuruucda qaban qaabada isduwaan gelinta codeeyaha ee kaydka, kaadhka daabacan ee isduwaan gelinta codeeyaha Oregon, calaamado, iyo waraaqo. Waad ku mahadsantahay inaad wakhti ku bixiso sii adkaynta bulshadaada - iyo wadankeena - codkaaga.
Waxa mahadleh haayadaha maxaliga iyo bulshooyinka helay wadooyin ay ku dabaaldagaan Maalinta Diwaangalinta Codeeyaha wakhtiyadan adag ahna kuwo aan la hubin. Naga soo fiiri kanaladayda baraha bulshada dhacdooyinka maqalka iyo muuqalka ah (Facebook, Instagram, iyo Twitter).
Qorshayso Inaad CODAYSO!
Si aad ugu dabaaldegto Nofember 3 Doorashooyinka Guud waxan ka codsanayna codbixiyayasha samaystaan qorshe ah CODAYN! Ficil diirada lagu saarayo codeeyayaasha iska yimaada liiskooda shaxda ah ee shanta talaabo si loo xaqiijiyo in codkooda la tiriyo:
Isku duwaan Geli Si AAD U CODAYSO.
COD yeelo oo horseed isbadel.
Waxa Ay Ku Eeg Tahay Isduwaan Gelinta Codaynta Oktoobar 13, 2020.
Talaabada kowaad ee qorshuhu waa is duwaan gelinta codaynta! Isduwaan gelinta codaynta ee doorashadan waxay ku eeg tahay Talaatada, Oktoobar 13. Cod bixiyayaasha Oregon waxay isku duwaan gelin karaan online ahaan www.oregonvotes.gov/register. Hadii aadan haysan Liiskanka Oregon ee baabur wadida ama kaadh aqoonsi waxad u bahantahay inaad buuxiso warqada kaadhka Diwaangalinta codbixiyaha Oregon ee laga heli karo xafiiska boostada US, goobaha leebareeriga ee wadanka, iyo Dhismaha Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections. Xarunta Codaynta Greshman waxay furnaan doonta Isniinta, Oktoobar 12 iyo Talaado, Oktoobar 13, oy ku diyaar yihiin shaqaalaha doorashada inay kaa caawiyaan diwaangalinta codaynta sidoo kale kaaga jawaaban hadaad hayso wax su'aal ah.
Hadii aad horay isu diwaanglisay inaad codayso waxan kaa codsanaynaa inaad hubiso ciwaanka iyo magaca inay yihiin kuwo la socda kaydka diwaangalinta codeeyaha. Cod bixiyayaasha macluumaadkooda waxaa online ahaan lasoo gelin doonaa www.oregonvotes.gov/myvote ama Kaadhka Duwaangelinta Codbixiyaha Oregon.
Macluumaadka kaadhka codbixiyaha maqan
Codbixiyayaasha ka maqan Maalin Doorashada meesha waxay dalban doonaan waraaqaha cod bixita maqnaanshaha in loogu soo diro boosta ciwaan ku meel gaadh ah. Kaadhka codbixinta kuwa maqan waxa la heli karaa 43 cisho ka hore doorasho walba ( Sibteember 21 doorashada Guud Noofember 3 awgeed) Si aan u helno kaadhka codbixiyaha maqan waa inaad dhamaystirtaa Codsiga arjiga Kaadhka codbixyaha maqan. waxaad ka heli kartaa arjiga iyo warbixin badan codbixiyaha maqan diwaangalinta onlinka multco.us/absentee. Sidoo kale waxad la xidhiidhi kartaa xafiiskayga elections@multco.us or (503)988-VOTE (8683) wixii caawin dheeri ah.
Macluumadka codbixiyayaasha eey barokiciyeen Dabka kaymaha ama arimo kaloo degdeg ah
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay diyaar u yihiin inay caawiyaan codbixiyayaasha ay barokiciyeen dabka kaymaha, qiiqa, ama xaalado kale oo degdeg ah. Codbixiyayaasha Degmada Multonomah kuwaasi oo kasoo barokacay guryahooda sabab walba sidoo kale walaac ka qaba codaynta Noofember 3 Doorashooyinka Guud, fadlan ogow in aan kashaqaynayno sidii aad u heli lahayd kaadhkaga codaynta, oo codkaaga loo maqli lahaa. Xallalka waxa ka mid ah kudarida ciwaanka boostada kumeelgaadhka ah ee kaydka diwaangalinta codbixiyaha ood ka heli karto boostada (oregonvotes.gov/myvote) inaad doorado in aad kasoo qaadato kaadhkaga codaynta mid ka mid ah goobaha adeega codbixiyaha. Xafiiska xoghayaha Doorshooyinka Oregon ayaa haya macluumad dheeri ah oregonvotes.gov/fires codbixiyayaasha soo barokacay.
In kabadan 20 sano Oregon ku codaynaysay boostada.
Multnomah County Elections and Oregon waxay la leedahay xidhiidh 20 sano United States Post Office (United States Postal Service, USPS). Doorashooyinka Oregon ku codee boostada u ogolow codbixiyayaashu inay joogan gurigooda, kuna codee boosto ama kusoo celi kaadhkaga codka Sanduuqa u gaarka ah Ballot ka (Official Ballot Drop Box).
Waxaad haysataa laba dookh oo kale ah soo celinta warqadaada codaynta. Hore u codee oo soo celi warqadaada codaynta. Shaanbad looma baahna! Waa inaad ku xisaabtantaa in warqadaada codaynta ee aad boosta kusoo dirtay ay nasoo gaadho Talaatada, Oktoober 27 si loo xaqiijiyo in xafiiskeeno wakhti u helo. Lama tirinayo tigidhka boosta Oregon.
Waxa aad sidoo kale keeni kartaa oo aad ku ridi kartaa Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah. Waxaad keentaa warqadaada codaynta Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah ee 24 saacadood ama Sanduuqa Laybareeriga Degmada Multnomah ee 24 saacadood ah. Dhamaan Sanduuqyada Goobaha Codaynta Degmada Multnomah ee Rasmiga ah waxa ay ku jiraan multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-somali-0.
Waraaqaha codaynta waa inay nasoo gaadhaan ugu danbayn 8:00 Subaxnimo, Habeenka Doorashada, Noofember 3, 2020.
Sanduuqa Codaynta Rasmi ah ee North Lombard Street wuxuu u guuray Green Zebra Grocery
Sanduuqa Codaynta Rasmi ah ee North Lombard Street Goodwill waa la wareejin doona laba sakadood bari, qaybta hore ee baaburta ladhigo Green Zebra Grocery Kentongoobta at 3011 N Lombard Street. Sanduuqa Codaynta Rasmiga ah wuxu ahaan doona goobtiisa iyo wakhtigiisa si uu u helo kaadhadhka codbixinta Noofember 3 Doorashada Guud. Fadlan ogow, Soo galitaanka Green Zebra Grocery wuxu ku yaala N Curtis Avenue. Sanduuqa Codaynta Rasmiga ah waxa laga soo qaaday Goodwill Store waxaana lagu samaynaya dayactir. Calaamado ayaa la dhigi doona Goodwill, lagu wargelinayo codbixiyaasha goobta cusub ee Green Zebra Grocery. Mahadbalaadhan waxa iska leh Green Zebra Grocery taageeradeeda dimuqiraadiyadeed iyo codbixiyayaasha Degmada Multnomah kuwa ku nool, ka shaqeeya ama ka dukaamaysta North Portland.
Xarunta Codaynta Gresham Waxay Furan Tahay - Oktoober 12, 2020
Doorashada Degmada Multnomah waxay ka furayaan goobtooda labaad Goobta Codbixinta Gresham laga bilaabo Oktoober 12 waxaanay soconaysaa ilaa Maalinta doorashada, Noofember 3. Goobta Codbixinta waxay ku taala kudaha Degmada Multomah dhismaha bariga ee 600 NE 8th wadada downtown Gresham. Cod bixiyaashu waxay ka heli karaan badelka waraaqaha codaynta ee la waayay, waxaana laga caawin karaa cod bixinta, waxay soo gudbin karaan su'aalo, ama waxay si shaqsi ah oga coddeyn karaan Xarunta Cod bixinta Degdega ah ee magaalada Gresham.
Doorashada Degmada Multnomah iyo COVID-19
Doorashada Degmada Multnomah waxay raacaysaa dhamaan talooyinka amaanka ee ay bixisay Xarunta Kahortaga iyo Xakamaynta Xanuunku (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) oo ay ku jiraan xidhashada waji gashadka iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Cod bixiyayaal badani waxay sidoo kale ku buuxin karaan online ahaan. Wixii su'aalo ah, la hadal 503-988 VOTE (8683).
Turjubaan ayay Heli Karaan Cod Bixiyayaashu
Doorashada Degmada Multnomah waxay u diyaarin doontaa turjubaan, bilaash ah, cid kasta oo u baahan in laga caawiyo luuqad aan Ingiriisi ahayn. Codaynta dheeraadka ah iyo macluumaadka doorashada oo ku qoran sagaal luuqadood waxaa online ahaan ay ku jiraan multco.us/education-and-outreach.
Doorashada Degmada Multnomah waxa ay samaysay wax badan kaliya si ayn u xaqiijin amaanka iyo sumcada Doorashada Guud ee Noofember 3 laakiin doorasho kasta oo aanu qabano. Waxaa jira qorshayaal amaan iyo nidaam lagu dhisay talaabo kasta oo nidaamka doorashada ah laga bilaabo samaynta bushqada warqada codaynta iyo nidaamka bixinta ee lagu soo celinayo waraaqaha codaynta lagu soo celiyay xafiiska iyo in si amaan ah oo sax ah loo tiriyo codadka. Waxa aad heli kartaan su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan amaanka doorashada oo jawaabtooduna waxya ku jirtaa Waaxda Doorashada ee websaytkeena.
Doorashada Degmada Multnomah waxa uu ka caawin doonaa dhamaan codeeyayaasha inay si fudud u codeeyaan, gaar ah oo masaxbanaan, fahmaan talaabooyinka codaynta, fahmaan shuruudaha codaynta, oo ay bartaan cida ay kaalmada waydiisanayaan.
Maalmaha Ka Hadhay Maalin Doorashada Noofember 3
Maalinta Isduwaan Gelinta Codeeyayaasha Qoran, Sebteember 22 2020
Waraaqaha Macluumaadka codeeyayaasha waxaa boosta loogu diri doonaa dhamaan guryaha dadka deegaanka - Oktoober 7, 2020
Waxa Ay Ku Eeg Tahay Isduwaan Gelinta Codaynta - Oktoobar 13, 2020.
Waraaqaha codaynta waxaa la bilaabi doonaa in boosta lagu soo diro - Oktoobar 14, 2020
Dhamaan codeeyayaashu waa inay helaan waraaqahooda codaynta. - Oktoober 22, 2020
Maalinta ugu danbaysa ee si amaan ah loosoo celin karo warqadaada codaynta oo boosta lagu soo dirayo - Oktoobar 27, 2020
Maalinta Doorashada - Waraaqaha codaynta waxa ugu danbaysa 8:00 habeenimo - Noofember 3, 2020
Natiijada doorashada ee saxda ah waxaa la ansixiyee - Noofember 23, 2020.
Furan Oktoober 12 - Noofember 3, 2020
Goobta Codaynta ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah
Taleefanka: 503-988-VOTE (8683)
Make a Plan to VOTE! Get Ready - Somali
U Dalaab Daga Maalinta Duwaan Gelinta Codeeyayaasha Qaran iyada oo La Samaysanayo Qorshe CODAYN!: In loo diyaar garoobo Noofemver 3, 2020 Doorashada Guud